Ny seranam-piaramanidina Liège-Bierset any Liège-Bierset dia seranam-piaramanidina lehibe any ambanivohitr'i Liège Grasse-Olon, latsaky ny 10 km miala ny foibe afovoan-tanàna. Izy no miasa hatramin'ny 1930. Any Lige, ny seranam-piaramanidina dia iray amin'ireo tobim- pitaterana lehibe indrindra ao Belzika .
Amin'ny resaka fivarotana, ny seranam-piaramanidina any Liège dia laharana voalohany amin'ireo seranam-piaramanidina belarosiana ary anisan'ireo seranam-piaramanidina TOP-10 any Eorôpa miaraka amin'ny fivarotana lehibe indrindra. Noho ny toerana manan-danja (izay miampita ny lalana mifandray amin'i Frankfurt, Paris sy Londona) dia maherin'ny 60% amin'ny fiaramanidina Air France rehetra no mamakivaky izany.
Araka ny isan'ireo mpandeha, ny seranam-piaramanidin'i Liège dia fahatelo, ao ambadiky ny seranam-piaramanidina ao Bruxelles sy Charleroi ; Herintaona dia tsy nahavita bisikileta 300 000 izy. Amin'ny ankapobeny, ny seranam-piaramanidina dia mitarika fiaramanidina 25 mahazatra, ary manatitra fiaramanidina charter ihany koa. Ity ny tobin'ny TNT Airways.
Ao amin'ny faritry ny seranan-tsambo dia misy: sampan-draharahan'ny fitsangantsanganana, tranom-bahoakan'ny Press International, biraon'ny mpizaha tany, ary biraon'ny orinasa logistics. Mazava ho azy, misy fivarotana maro ao amin'ny seranan-tsambo izay ahafahanao mividy fofomamy sy kojakojam-bola amin'ny vidiny sarobidy, vokatra vita amin'ny hoditra sy firavaka, sigara, alika ary, mazava ho azy, ilay sôkôla malaza Belzika.
Misy koa hotely iray eo amin'ny faritry ny seranam-piaramanidina. Ny Park Inn avy ao amin'ny Radisson Liege Airport Hotel dia 100 metatra hotely misy toeram-pitsangatsanganana, efitrano fitahirizana, efitrano fivoriana. Ho an'ireo tsy mpandeha dia maimaim-poana mandritra ny 3 ora ny fiara.
Ahoana no hialana amin'ny seranam-piaramanidina mankany Liège?
Afaka manomboka amin'ny seranam-piaramanidina ianao dia afaka amin'ny fiara fitateram-bahoaka any afovoan-tanànan'i Liège (laharana bus 53) ary mankany amin'ny gara (fiara fitaterana 57, mandeha amin'ny 7-00 ka hatramin'ny 17-00 ora amin'ny ora 2). Mora kokoa ny mandeha taxi ao an-tanàna. Raha mandeha fiara amin'ny fiara voasa ianao, dia tokony handeha amin'ny làlambe E42, izay mihazakazaka eo akaikin'ny laharana 3.
Ostend, Belzika - atraksyon
Inona no hitranga any Ghent mandritra ny 1 andro?
CardCard Gent Card
Liège, Belzika - hotely
Aiza no hividianana vidin'entana any Bruxelles?
Ny fametrahana ny efitranon'ny ankizy
Sakafo sandoka misy alika sy pòm
Modely ho an'ny trano fivoriana
Teraka teo aloha - antony
Sparaxis - fambolena sy fiahiana
Valeriana miaraka amin'ny HS
Miverina indray ny sela: Melania Trump dia nampiseho sary roa tena izy
Apple vinaigera ho an'ny fahavoazana mavesatra: recipe iray
Menaka camphor ho an'ny volo
Cystitis - soritr'aretin'ny dingana rehetra sy karazana aretina rehetra
Ahoana ny hanentanana ny tovolahy iray hijery?
Make up on party party under a dress blue
Herisetra izay manamaivana ny tsindry
Daty palmie ao an-trano
Catarrhal otitis amin'ny ankizy - fitsaboana